Mashruuca Kanal Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeMashruuca Kanal ee Istanbul
Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka, Murat Kurum, wuxuu sheegay inay qiimeyn ku sameeyeen diidmada mashruuca Canal Istanbul ee hanaanka EIA ayna ansaxisay warbixinta EIA ilaa maantadan la joogo. Machadka wuxuu weydiiyay su’aalo ku saabsan Mashruuca Kanal Istanbul iyo ajendaha dhismaha Wasaaradda. [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa ka hadlay "Shirka Qiimaynta Sanadka 2019" ee Saray. Erdogan, oo bixinaya tirooyin ku saabsan caafimaadka, waxbarashada, cadaaladda, la dagaalanka argagaxisada iyo maalgashiga ayaa sheegay in mashruuca Kanal Istanbul dhowaan la bilaabi doono. Madaxweynaha [More ...]
Isaga oo ka hadlaya furitaanka Smart Cities iyo Kongareeska Degmooyinka iyo Bandhigga, Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka Murat Kurum ayaa sidoo kale la wadaagay qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan Mashruuca Channel Istanbul. Machadka Wasiirka, “Channel Istanbul, markii la dhameystiro [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa hadal uu ku sheegay telefishan gaar ah ku sheegay in ay sameyn doonaan mashruuca Kanal Istanbul ayna u diraan qaansheegta IMM. Waxaan ku jirnaa suurtogalnimada mashaariicdeena [More ...]
Warbixinta TÜBİTAK Channel Istanbul
Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul khudbadiisa waxaa soo agaasimay kanaalka Istanbul, TUBITAK'ın Channel Istanbul, isagoo tixraacaya warbixintii la helay. 'Haddii aad rabto ama aadan rabin waxaa lagu qaban doonaa Istanbul Channel' Madaxweynaha [More ...]
Shirka “Isbadalka Cimilada iyo Dood-cilmiyeedka Biyaha ee ay soo abaabushay Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul, waxaa laga wada hadlay saameynta suurtagalka ah ee Kanal Istanbul ee ilaha biyaha. Kaqeybgalayaashu waxay soo bandhigeen heshiis weyn oo loogu magac daray Mashruuca Kanal ee Magaalada Istanbul, kaasoo ay halis ugu jiraan isbedelka cimilada iyo harraad. [More ...]
IMM waxay qabanqaabin doontaa aqoon isweydaarsi si loo muujiyo aragtida saynisyahannada ee ku saabsan Kanal Istanbul iyo si ay u siiyaan macluumaadka dadka reer Istanbul. Khudbadda furitaanka aqoon isweydaarsiga ayaa lagu wadaa in lagu qabto Xarunta Kongareeska ee Istanbul berri. [More ...]
İmamoğlu: Mashruuca Kanal İstanbul Ma Noqon Karo 'Waxaan Sameeyay Mashruuca'
Ekrem Imamoglu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa booqday Bagcilar. İmamoğlu wuxuu kajawaabay su’aalaha saxafiyiinta ee ku saabsan ajandaha inta lagu gudajiray baaritaanada uu kusameeyay Bağcılar. Imamoglu, saxafiyiin, Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Codsiga Baskan Soyer ee Channel İstanbul
Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu sheegay in etmen oo diidan mashruuca Channel Istanbul ay tahay waajib muwaadinimo isla markaana ay codsi u gudbiyeen Maamulada Deegaanka iyo Magaalooyinka si loo joojiyo mashruucan. Duqa Magaalada İzmir Tunç [More ...]
Wasiirka Turhan: Haddii kanaalada aan laga qaban Istanbul, tani waxay ina cadaadin doontaa
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee Jamhuuriyadda Turkiga, ayaa booqday Governorate ka dib markii ay dib u eegis ku sameeyeen dhismaha wadada loo yaqaan 'ringway' ee ku taal goobta Çankırı Kenbağ. Turhan ayaa soo dhaweysay Guddoomiyaha Xamdi Bilge Aktaş, oo la saxiixday buugga sharafta ee guddoomiyaha. Çankırı [More ...]
Maxaa laga qaban doonaa inta ay la egtahay mashruuca Kanal Istanbul?
Baaxadda mashruucu leeyahay, isugeyn 7 isgoys tareen iyo 2 isgoysyo metro ayaa la sawiray, oo ay ku jiraan 2 buundooyin wadada, hal buundo iyo isgoysyada dhulka hoostiisa mara. Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan sanadkii 2011 [More ...]